नेपाल आज | बारा र पर्सामा हावाहुरीको भन्दा केन्द्र र प्रदेश सरकारको बितण्डा भयानक
बारा र पर्सामा हावाहुरीको भन्दा केन्द्र र प्रदेश सरकारको बितण्डा भयानक
बुधबार, २० चैत २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
बारा र पर्सा जिल्लामा हावाहुरीले जनजीवन अस्तव्यस्त भएकाबेला केन्द्र र प्रदेश सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति आक्रोश बढेको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले मानविय संवेदनामाथि खेल्दै राजनीतिक लाभ लिन खोजेको भन्दै जनस्तरबाट आक्रोश बढेको हो ।
दुःखको बेला ओली सेलिब्रेटी बन्न खोजे
मधेसी नागरिक समाजका संयोजक गणेशकुमार मण्डल भन्छन्, ‘ केन्द्र सरकारले घटना थाहा पाउने बित्तिकै सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेर जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यो भएन । प्रधानमन्त्री ओली आफू हेलिकप्टरमा घुम्नुभयो, आफनो पार्टीका कार्यकर्तालाई ट्वीटमार्फत आदेश दिनुभयो, यो निन्दनिय छ ! ’
केन्द्र सरकारले सुरुमै नेतृत्व लिएर उद्दार र राहतको काम अघि बढाउन सक्थ्यो, तर हेरेर बस्यो । अर्को दिन ‘सेलिब्रेटी स्टायल’ मा प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरुले जुन तमसा देखाए त्यसले पीडितको घाउमा मलहम होइन नूनचुक छर्केको छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले ‘टसल’ गरे
प्रदेश २ सरकार त नाकाम सावित भयो । यस्तो दुःखको घडीमा पनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्र सरकारसंग ‘टसल’ गर्न खोजे । प्रधानमन्त्रीलाई दोषारोपण गरे । अरुलाई दोष दिएर भाग्ने समय हो यो ? उनको दायित्व छैन ? सकभर आफूले गर्ने नभए अरुलाई आह्वान गर्ने हो । यी मुख्यमन्त्रीले त जग हँसाए । क्याबिनेटबाट तीन–तीन लाख रुपैयाँ बितरण गर्ने भनेर निर्णय गर्दैमा पुग्छ ?
पीडितको अहिलेको आवश्यकता के हो, त्यस अनुसार सहयोग गर्ने हो । पीडितलाई बस्नलाई बास छैन, खानलाई गास छैन, शौचालय छैन । त्यो तीन लाख कहिले पाउने हो ? कहिले प्रयोग गर्ने हो ? परिस्थिति अनुसारको सहयोग गर्नुपर्यो नी !
पार्टीका ब्यानर बोकेर सहयोग
केही प्याकेट बिस्कुट र चाउचाउ बोकेर सहयोेग गर्न गएका छन् । सहयोग हस्तान्तरण गर्नूभन्दा अघि आफनो पार्टीको झण्डा र ब्यानर देखाउँदै परिचय दिन्छन् । त्यस्तै परे सदस्यता लिने कुरासमेत निकाल्छन् । यो जस्तो लाजमर्दो कुरा के हुन्छ ?
सहयोग सामग्रीको सन्तुलित बितरण हुन सकेको छैन । कसैले बढी र कसैले पाउँदै नपाउने स्थिति छ । उपचारको व्यवस्था हुन सकेको छैन । केन्द्रबाट सहयोग सामग्री पठाएको ठूलै प्रचार भएको छ, तर त्यहाँ केही पुगेको छैन ।
संयोजक मण्डल भन्छन्, ‘ सहयोग रकम र राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार हुने खतरा छ । ’
राजपा, फोरम, सीके सबैका नक्कली आँशु
तराईंका जनताले भोगेको दुःखमा मधेसवादी पार्टी राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र सीके राउतको जनमत पार्टी सबैको भूमिका देखावटी मात्र हो । यी पार्टी कांग्रेस र नेकपाका भ्रातृ संगठन जस्तै हुन् ।
‘नपाएसम्म मधेसी जनताको नाममा बिरोध गर्छन्, पाएपछि दुई हातले हसुर्छन् । देख्नु भएन उपेन्द्र यादव र केपी ओली संगसंगै हिंडेको ? ’ मण्डल भन्छन् ।
मधेसी जनता र तराईंको आँशु पुछ्न व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ परित्याग गर्नसक्नु पर्छ । त्यो चरित्र हाल देखिएका कुनैपनि दल र नेताहरुमा नदेखिएकाले बैकल्पिक शक्ति र नेताको आवश्यकता खड्किएको छ ।